Huawei P30 sy P30 Pro: Famaritana, vidiny ary fanombohana ofisialy | Androidsis
Araka ny voamarina herinandro vitsivitsy lasa izay, ny laharan'ny Huawei P30 dia natolotra ofisialy anio 26 martsa any Paris. Tao anatin'izay herinandro izay dia be ny tsaho momba ity farany ambony an'ny marika sinoa. Ny ampahany amin'ny famaritana azy dia efa mitete, izay avela hanana hevitra mazava tsy azontsika antenaina. Farany, efa natolotra izy ireo.
Satria ofisialy ny Huawei P30 sy P30 Pro. Ny farany avo lenta an'ny marika sinoa, izay manolo-tena amin'ny endrika nohavaozina, ary koa ny fijerena manokana ny fakantsary, izay ametrahana ny marika ho fari-pahaizana amin'ity sehatra ity Ny tampon'ilay laharana roa izay tadiavin'ny orinasa hidona amin'ny latabatra.
Manaraka izany dia miresaka aminao izahay isaky ny telefaona roa ireo. Izahay dia manolotra ny famaritana ny tsirairay amin'izy ireo aloha, mba hahazoanao hevitra. Avy eo, holazainay aminao bebe kokoa ny momba azy ireo, sy ireo fanovana marobe natolotry ny orinasa amin'ity andiany Huawei P30 ity. Inona no azontsika antenaina amin'izy ireo?
1 Famaritana Huawei P30
1.1 Huawei P30: mandroso ny farany
2 Famaritana Huawei P30 Pro
2.1 Huawei P30 Pro: Photography no ifantohana
2.2 Processeur, RAM, fitehirizana ary bateria
Famaritana Huawei P30
Manomboka amin'ny maodely izay manome ny anarany ity marika farany ambony an'ny marika sinoa ity isika. Smartphone finday kalitao, ahitantsika ny fiovan'ny endrika nampidirina ao. Araka ny manamboatra notch kely miendrika rano iray mitete, malina kokoa, izay tsy manjaka amin'ny efijery. Ho fanampin'izany, ity Huawei P30 ity dia manolo-tena hampihena ny sarin'ny efijery fatratra. Izay mamela anao hanararaotra tsara ny aloha.
Ao ambadiky isika dia manana fakantsary telo ao amin'ilay fitaovana. Ho fanampin'izany, ny sensor sensor dia nampidirina tao amin'ny efijen'ilay fitaovana. Ireo no Huawei P30 famaritana feno:
Famaritana teknika Huawei P30
efijery 6.1-inch OLED miaraka amin'ny famaha Full HD + 2.340 x 1.080 teboka ary 19.5: 9 ratio
Tahiry anatiny 128 GB
Fakan-tsary aoriana 40 MP miaraka amin'ny vava f / 1.6 + 16 MP miaraka amin'ny vava f / 2.2 + 8 MP miaraka amin'ny vava f / 3.4
bateria 3.650 mAh miaraka amin'ny SuperCharge
lafiny X X 71.36 149.1 7.57 MG
vidiny 749 euros
Isika ambonin'ny tampon'ny laharana rehetra, izay manazava tsara ny fandrosoana nanjary an'io faritra io tao anatin'izay taona maro izay. Raha tamin'ny taon-dasa dia nisy fiakarana avo lenta, izay azo adika koa amin'ny varotra tsara. Zavatra tadiavin'ilay marika hamerina amin'ity taona ity miaraka amin'ireo maodely vaovao, miaraka amin'ity Huawei P30 ity eo an-tampony.
Tsara endrika, specs tsara, ary fanatsarana maro, momba izay holazainay aminao bebe kokoa etsy ambany, mba hahafantaranao ny zavatra avelan'ity faritra farany ambony ity hamela anay.
Huawei Nova 4e: smartphone vaovao afovoany vaovao an'ny marika
Huawei P30: mandroso ny farany
Amin'ny lafiny iray, dia hitantsika fa ny marika sinoa dia mizatra amin'ny tsena amin'ny endrika endrika. Avelany amina toerana malina kokoa izahay, izay tsy manjaka loatra amin'ny efijery finday. Ho fanampin'ny frame matevina kokoa, izay mamela ny fampiasana tsara kokoa ny alohan'ny fitaovana. Any aoriana, vita amin'ny vera, hitantsika ireo fakantsary telo aoriana ireo.
Ireo fakantsary dia tsy isalasalana fa ny teboka matanjaka amin'ity haavo haavo havaozina ity. Azontsika jerena ihany koa io Huawei P30, izay mampiditra sensor telo samihafa. Ny tsirairay amin'ireo sensor dia manana tanjona, ary io fangaro io no ahafahan'ny mpampiasa maka sary tsara kalitao amin'ny fotoana rehetra miaraka amin'ny avo lenta. Ho fanampin'izany, ny faharanitan-tsaina artifisialy dia tompon'andraikitra amin'ny fampivoarana ireo fakantsary ireo, ary koa ny eo aloha. Ao amin'ny fakantsary eo anoloana dia ananantsika koa ny fanalana ny tarehy ny fitaovana. Ny sensor sensor dia nampidirina tao ambanin'ny efijery, araka ny nandrasana amam-bolana maro.
Tonga ilay fitaovana miaraka bateria mahazaka 3.650 mAh, izay misy famahanana haingana ihany koa. Miaraka amin'i Kirin 980 sy Android Pie, afaka manantena fizakantena lehibe amin'izany isika. Tonga ihany koa izy miaraka amin'ny sosona vao haingana indrindra an'ny marika shinoa, EMUI 9.1 teratany.
Famaritana Huawei P30 Pro
Eo amin'ny toerana faharoa no ahitantsika ny telefaona mitarika ity faran'ny marika Sinoa ity. Smartphone finday kalitao, matanjaka ary misy famaritana tsara. Mikasika ny famolavolana, Ny Huawei P30 Pro dia mampiasa ihany koa notch kely miendrika rano iray mitete eo amin'ny efijery. Fanamarihana malina kokoa, izay ahafahanao manararaotra tsara ny alohan'ilay fitaovana. Any aoriana dia manana sensor efatra isika, fakantsary telo ary sensor TOF, fitambarana izay mihoatra ny fakantsary matihanina.
Ho an'ny ambiny, ny Huawei P30 Pro no lasa telefaona tsara indrindra izay hitantsika ao amin'ny katalaogy Amin'ny marika. Ireto ny fepetra manokana momba ny fitaovana:
lafiny X X 158 73.4 8.41 MG
lanja Gramin'ny 192
Ho fanampin'ny famolavolana vaovao, ny Huawei P30 Pro koa dia manome lanja ny loko vaovao. Herintaona lasa izay raha nametraka loko gradient ny marika, izay hitantsika taty aoriana tamin'ny telefaona maro hafa ao amin'ny katalaoginy, ho fanampin'ny "aingam-panahy" ho an'ny marika maro hafa amin'ny Android. Ao amin'ny maodely amin'ity taona ity isika dia manana loko vaovao, dia:
White perla (manahaka ny feon'ny perila)
Amber Sunrise (vokatry ny gradient eo amin'ny volomboasary sy mena)
Aurora (maka tahaka ny lokon'ny Jiro Avaratra, misy alokaloka eo anelanelan'ny manga sy ny maitso)
Breathing Cristal (feo manga aingam-panahy avy amin'ny rano Karaiba)
Safidy iray mahaliana indrindra, antsoina handresy ireo mpampiasa amin'ity fisafidianana ity. Na dia tsy ny famolavolana ihany no niova tamin'ity haavo farany ambony marika ity. Satria mahita vaovao maro amin'ny telefaona koa izahay, izay ataovy flagship vaovao ny marika, iray volana aorian'ny fampisehoana ny Mate X.
Huawei P30 Pro: Photography no ifantohana
Tsy isalasalana fa ny fakantsary no fitaovam-piadiana lehibe entin'ity Huawei P30 Pro ity. Ny marika sinoa dia mampiasa fitambaran-sensor efatra amin'ny telefaona. Voalohany indrindra dia manana ny 40 MP sensor lehibe miaraka amina f / 1.6 aperture Ary miaraka amin'ny sivana RGB nohavaozina izy io. Ny maitso an'ny sivana RGB dia novaina tamin'ny loko mavo, mba hananany fahatsapana bebe kokoa amin'ny hazavana, amin'ny haavon'ny fakantsary matihanina. Ny sensor faharoa dia 20 MP mivelatra amin'ny zoro 120º misy aperture f / 2.2 ary fahatelo, izay iray amin'ireo tsy ampoizina lehibe.
Satria i Huawei dia mampiditra sensor 8 MP miaraka amina aperture f / 3.4, toradroa, satria ao anatiny manana ny zoom 5 periskop izahay. Zoom mahatalanjona izy io, mamela ny zoom 10x optique, ny zoom zoom 5x ary ny zoom digital 50x, tsy misy kalitao very. Lafiny iray nantsoina hamerenana amin'ny laoniny ny tsena. Miaraka aminy dia manana ny sensor TOF isika, izay natao hahatakatra ny fiasan'ny fakantsary, ary hahafahana mampihatra fanatsarana. Izany no antony ananantsika koa fahiratan-tsaina artifisialy ao.
Ny fakantsary amin'ity Huawei P30 Pro ity dia revolisiona eo amin'ny tsena. Mampiasa ny AIS ihany koa izy ireo, izay mamela fanamafisana tsy manam-paharoa ireo sary, miaraka amina mode night izay napetraka ho tsara indrindra eny an-tsena. AI HDR + dia ampidirina ao amin'ireo fakantsary ireo ihany koa. Noho io teknolojia io dia azo takarina amin'ny fotoana tena izy ny fahazavana, mamela ny hazavana ho tambiny raha ilaina izany. Zavatra ilaina amin'ny fampiasana azy amin'ny karazana toe-javatra rehetra.
Farany, na ny OIS na ny AIS dia natolotra tamina horonan-tsary. Mba hahafahan'ireo horonan-tsary miovaova amin'ny fotoana rehetra, na dia mandrakitra horonantsary amin'ny alina aza. Izay mamela kalitao avo kokoa amin'ny karazana toe-javatra rehetra. Ho an'ny fakantsary eo anoloana dia 32 MP misy f / 2.0 aperture no ampiasaina, izay ananantsika koa ny famohana ny tarehy.
Processeur, RAM, fitehirizana ary bateria
Ho an'ny processeur, Kirin 980 no voafidy amin'ny alàlan'ny marika ho atidohan'ity Huawei P30 Pro ity. Nampiditra ny processeur tamin'ny taon-dasa Izy io no mahery indrindra ananantsika eo amin'ny sehatry ny marika. Ho fanampin'izany, hitantsika ny fisian'ny faharanitan-tsaina artifisialy ao. Izy io koa dia manana singa fanodinana manokana momba an'io.
Raha ny RAM, mahita safidy tokana an'ny RAM 8 GB izahay, na dia manana tahiry maromaro aza izahay. Ireo mpampiasa dia afaka misafidy 128, 256 ary 512 GB fitehirizana anatiny. Ny fitambarana rehetra dia manana ny mety hanitarana ny habaka voalaza, noho izany ny fahaiza-mitahiry dia tsy ho olana amin'ny mpampiasa rehetra.
Ho an'ny bateria, araka ny efa re, dia nitombo ny fahaizany. Manana ity Huawei P30 Pro ity bateria mahazaka 4.200 mAh. Ho fanampin'izay, mahita fiampangana haingana 40W SuperCharge ao isika. Noho io fiampangana io, ny 70% ny bateria dia afaka ampandoavina 30 minitra fotsiny. Manana fiampangana tsy misy tariby ao aminy koa izahay.
Amin'ny maha rafitra fiasa azy dia efa misy Android Pie teratany. Miaraka amin'ity kinova ity dia manana EMUI 9.1 ho toy ny sosona fanaingoana izahay. Miaraka amin'ny processeur sy ny asan'ny fitantanana bateria an'ny Android Pie dia tsy ho olana amin'ny fahita lavitra ny fizakantena. Lafiny iray hafa manandanja.
Huawei P Smart + 2019: ny afovoany vaovao an'ny marika
Raha vao fantatra ny famaritana ireo telefaona roa ireo dia tsy maintsy fantarintsika ihany hoe rahoviana izy ireo no halefa any amin'ny magazay, ankoatry ny vidiny izay ho azon'izy ireo isaky ny dikanteniny. Na dia amin'ity tranga ity aza, mahita kinova tokana izahay raha ny maodely tsotra indrindra .
Amin'ny tranga Huawei P30, manana tokana 6/128 GB tokana izahay. Ny vidin'ity telefaona ity eo amin'ny tsena espaniola dia 749 euro, satria azo natao ny nahafantatra izany noho ny filtration teo aloha, satria i Carrefour dia nametraka ireo finday amidy mialoha. Navoaka tamin'ny loko isan-karazany izy io, toy ny efa naneho hevitra tamin'izany fotoana izany, toy ny mainty, Aurora na Breathing Crystal. Ny mpanjifa dia afaka misafidy ny loko tadiaviny. Loko dimy amin'ny fitambarany, ho an'ireo maodely roa.
Amin'ny lafiny iray, tonga ny Huawei P30 Pro miaraka amina fitambarana maro samihafa 8/128 GB, 8/256 ary 8/512 GB. Noho izany ny mpanjifa dia afaka misafidy mifototra amin'ilay heveriny fa tena mety aminy. Amin'ny anao, ny vidiny dia:
Ny kinova miaraka amin'ny 8/128 GB dia vidin'ny 949 euro
Ny Huawei P30 Pro miaraka amin'ny 8/256 GB dia tonga amin'ny vidiny 1049 euro
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei P30 sy P30 Pro: havaozina ny avo lenta